BLAOGY RTN | Haisoratro
Ireo tononkalo nosoratako
Tamin'izaho kilasy " Seconde " tao amin'ny Saint Michel no nanombohako nanoratra tononkalo. Noraiketiko antsoratra tao anaty boky kely izy ireo, ary farany dia nampetrako tao amin'ny tranonkala serasera. Inty ny rohy ahitanao ireo tononkalo nosoratako: Tononkalo...
Ny fitiavana dia toy ny rivotra
Indray mandeha izay aho sendra lasa saina sy nandinika nymomba ny fitiavana, dia tsapako fa toy ny rivotra ny fitiavana. Izy no mamelona ny olona,ary mety mahafaty ny olona koa anefa izy amin'ny lalan'ny rivo-doza. Mety hangatsiaka izy, mety hafana kanefa tsy mety maty.
Ity misy tononkalo faraparany nosoratako anisany ankafihiziko tokoa, hozaraiko aminareo Ny Tsiambaratelon'ny fandresena Ny fanana "Tanjona" eo amin'ny fiainana No torolanana ahitana ny aleha Arahina 'drafitra hatao foto-pisainana Hiforonan'ny lalana afaha-mandeha Koa...